အထူးအနံ့ဖယ်ရှားပေးသည့် RT-16 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုံ - Shandong Raytop Chemical Co. , Ltd ။
ပလတ်စတစ် Optical Brighteners
ဆပ်ပြာ Optical Brighteners
အထည်အလိပ် Optical Brighteners
စက္ကူ Optical Brighteners
သိုးမွှေး Optical တောက်ပ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အနံ့ဆိုး > အထူးအနံ့ remover RT-16
optical အလင်းရောင် FP-127
အထူးအနံ့ remover RT-16
RT-16 သည်အထူးသဖြင့် deodorant ဖြစ်ပြီးပလပ်စတစ်ပြုပြင်ခြင်း၊
RT-16မွှေးကြိုင်သောအနံ့ကိုဖြေရှင်းရန်တီထွင်ထားသောအထူး deodorant ဖြစ်သည် ပလပ်စတစ်, တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်အခြားထုတ်ကုန် ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲနဲ့၌တည်၏။
RT-16ရှိပါတယ် အနံ့ဆိုးတစ်ခုပါ Non- အဆိပ်နှင့်အတူ နှင့် Non- ဆွ။
2.Physical Properties ကို
အသုံးပြုသည့်အခါအသုံးပြုသူအရသိရသည် deodorant အားကုန်ကြမ်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအညီအမျှရောနှောပါ ဖောက်သည်’s ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေများ။ အရောအနှောများလေလေ deodorant ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အပူချိန်မြင့်လေလေ deodorization အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုမိုသိသာသည်။ (အပူချိန်သည် ၃၀၀ ဒီဂရီအတွင်း) ။
For Masterbatch or pellet ဖောက်သည်s ,suggestion is that after the granulation, then bake in the oven at 80 degrees for 2-hours, နှင့် then comparing the result or place the product about 24 hours to compare the results.
နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများသည်ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ရန်အပိုပစ္စည်းများကိုထည့်ပါက ၂၄ နာရီထားရှိပြီးရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။
(All the above can be used asareference. The specific operation can be ပုံစံulated according to the ဖောက်သည်'s own processing technology.)
လျှောက်လွှာအကြံပြုချက် - 0.1% -0.5%
ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း - ၀.၃% + (ပြန်လည်ရရှိသောပစ္စည်းအချိုးအရပြန်လည်အသုံးပြုသောပစ္စည်းပမာဏကိုတိုးပါ)
5.Packaging နှင့် storage:
RT-16 အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ် ပုံစံ နှင့် ၂၅ ကီလိုဂရမ် အတွင်းအပြင်လူမီနီယံထုပ်ပိုးနှင့်အတူတစ် ဦး ပုံးထဲမှာထုပ်ပိုးနေကြသည်။ ၎င်းကိုသန့်ရှင်းသော၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော၊ ခြောက်သွေ့သောနေရာ၌ထားသင့်သည် 12 လ၏သိုလှောင်မှုကာလနှင့်အတူ။
hot Tags:: အထူးအနံ့ဖယ်ရှားပေးသည့် RT-16၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံများ၊
အနံ့ remover RT-101
အနံ့ remover RT-567
အနံ့ remover RT-39
အနံ့ remover RT-226
လိပ်စာ: No.38-7 HuanengRoad, Jinan, Shandong, တရုတ်
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Shandong Raytop Chemical Co. , Ltd ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး